Video: Social Mgbanwe mgbanwe 3 | Martech Zone
Video: Social Mgbanwe Mgbanwe 3
Wednesday, July 13, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Maka ihe ụfọdụ, ike gwụrụ m ikiri vidio ndị a dị ịtụnanya Ndị mmadụ. E bipụtara vidio ọhụrụ a nke Socialnomics vidiyo na June, 2011. Erik Qualman guzobere Socialnomics na ebumnuche nke ịnye Social & Mobile Statistics, Studies & ịtụnanya. Jide n'aka na ilele blog nke Erik. Enwere m olileanya inweta ya na Ihe omuma ahia ahia ụbọchị ụfọdụ!
Ọ masịrị m… ọ bụ ezie